Izimpi ezikoleni ngeGcokama noKhuzani - Ilanga News
Home Izindaba Izimpi ezikoleni ngeGcokama noKhuzani
Izimpi ezikoleni ngeGcokama noKhuzani
Sekungenelele uhulumeni abafundi begijimisana ngocelemba
UMNU Ravi Pillay noVuyi-swa Caluza belalele ngo-bunono izikhulumi ebeziso-hlelweni.
IZITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE
UKWESEKWA kwezilomo zikamaskandi, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose noMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, sekudale ukuphazamiseka kokufunda ezikoleni ezimbili zaseMshwathi, osekuze kwangenelela izikhulu zikahulumeni ukuxazulula le nkiyankiya.
Ukuklolodelana kwabafundi abalandela lezi zinkunzi zomculo wesintu, okuthiwa bagqoka amabhande abomvu (aweGcokama) na-blue (eNdlamlenze), kuthiwa kugcine kuphazamisa ukufunda eMthuli Secondary naseSikhululiwe Secondary School, kwazise kuthiwa sekukhona ababizwa ngamadixa, abanye babizwa ngezihlakaniphi.
Lesi simo kuthiwa sidale ukuba iNkosi yaseMathulini, iNkosi Mhlabunzima Mthuli, eMshwathi, yangakuthola ukuphumula, yawuhlaba yawulawula kuHulumeni waKwaZulu-Natal, yacela ukuba ungenelele, ukhuze lokhu kuklolodelana ezikoleni ngoba isaba ukuthi hleze kuchitheke igazi esizweni soyisemkhulu.
ILANGA lithole ukuthi iNkosi Mthuli kayikutholi ukukhululeka emoyeni ngenxa yokugijimisana ngocelemba kwabafundi abazibiza ngabalandeli balaba baculi asebephenduke inkukhu nempaka ezikoleni.
NgoLwesine olwedlule iSekela-sotswebhu eSishayamthetho sa-KwaZulu-Natal, uVuyiswa Caluza liphelezelwa nguNgqongqoshe wezeMali uMnu Ravi Pillay oyingqwele yentuthuko kuMasipala wesiFunda uMgungundlovu bahambele lezi zikole beyobhula umlilo.
Lezi zikhulu zijoyinwe yiMeya yaseMgungundlovu, uNdlunkulu Thobekile Maphumulo noNkk Thandiwe Zungu owayeyisekela lakhe kodwa osesePhalamende eCape Town, nezikhulu zoMnyango weMfundo KwaZulu-Natal nasesifundeni uMgungundlovu.
ILANGA lithole nokuthi ngaphandle kwale nkinga yamabhande, othisha balezi zikole bakhathazwa nawukungaqoqeki kwabafundi, okufaka phakathi ukusebenzisa izidakamizwa ngendlela engamukelekile uma besesikoleni nokukhulelwa ngobuningi kwamantombazane, ikakhulukazi angaphansi kweminyaka ewu-15.
Uthishanhloko waseMthuli Secondary, uMnu Sipho Sishi, uthe uzizwa ethobekile ngokuhambela kwezikhulu zikahulumeni esikoleni sakhe.
“Bengingathembi ukuthi lesi sikole sizokwazi ukugcina imiphumela emihle kamatikuletsheni njengoba nyakenye ibe wu-58% isuka ku-53% wango-2018, yize be-kufundwa ibhekene ngeziqu zamehlo, kulolelwene ocelemba.
“Besingakujabulela ukuthi kwa-ndiswe nabaqaphi lapha esikoleni ukuze kuqine ukuphepha,” kusho uMnu Sishi. INkosi Mthuli ithe iyayikhathaza indaba yala mabhande (okweseka laba baculi) ngoba adala izimpi zemibango ezingakaze zenzeke emlandweni walesi sizwe. Ithe umkhandlu wayo usabonisana ukuthi ungangenelela kanjani ekulungiseni lesi sikole.
“Lesi sikole siqanjwe ngegama lenkosi eseyakhothama, kodwa yisona esinezinkinga eziningi. Siye sizwe kuthiwa ezinye izimpi zidalwa wumbango wezintombi, engikuchithayo mina ngoba ngazi ukuthi esikoleni kunezingane, hhayi izintombi.
“Siyazama ngazo zonke izindlela ukuthi kube khona okuhle okuvela kulesi sikole,” kusho inkosi. Isekela-sotswebhu likuhlabile ukungena kwezinto ezingahlangene nomfaniswano wesikole esikoleni. Lithe la mabhande abomvu naluhlaza akumele ngabe kumiwa ngawo njengembangela yempi.
“Kusukela namhlanje, uma la mabhande engesiwona umfaniswano, mawavalwe ezikoleni. Uma isikole singenawo umthetho, kuningi okonakalayo. Uye athini umzali uma ebona ingane yakhe ingawufakile ngokupheleleyo umfaniswano wesikole?
“Izikole mazizibekele indlela yokuziphatha, besekubizwa abazali ukuba bazozibophezela ukuthi bayahambisana nayo. Makuthi uma umfundi esephambukile kuleso sibopho, kubizwe umzali kuyolungiswa lokho kuphambuka kwakhe,” kusho yena.
Imizamo yokuthola iGcokama neNdlamlenze ukuba baphawule ngokwenziwa ngabafundi emagameni abo, iphunzile, izingcingo zabo bezikhala zingabanjwa.
Previous articleUgeqa amagula uSbu Mpisane
Next articleSekukubaqeqeshi beChiefs ngoBilliat